Gargaarsa Gullisootti Maanguddoo Suuraan Isaanii Miidiyaa Hawaasummaa Irratti Tamsa’ee fi Harka-qalleeyyii Ka Biroof Taasisame
Maanguddoo godina Wallaggaa Lixaa, aanaa Gullisoo, suuraan isaanii miidiyaa hawaasummaa irratti baay’inaan qoodameef deggersi akka taasisamaafii jiru, Qindeessaan dhaabbatni tola-ooltota Waldaa Dhalattoota Gullisoo fi Naannoo ishee jedhu himee jira.
Waldaan kun namoota galiin isaanii gadi bu’aa tahe 180 tahaniif deggersa midhaan nyaataa fi Zayita nyaataa akkasumas buufata fayyaaf ammoo meeshaalee qulqullina harkaa ittiin eeggatan gumaachuu dubbateera. Sababaa garaa garaan namoota namoota rakkoof saaxilamaniif birmachuun ni barbaachisa jedha.
Dhimmuma kanarratti kan yaada isaanii kennan, ogeessi dinagdee Doktor Guutuu Teessoo, hojii deggersaa hojjatamu biratti, rakkoo Oromiyaa Lixaa fi Kibbaa bifa waarawaan furuurratti hojjatamuu qaba jedhan.
Talaalii Koviid-19 Ittisu Arguuf Abdiin Jiru Maal Fakkaata?
Mormii Amerikaa Keessaa Fi Haala Inni Uume
Xiinxala Waa'ee Hidhaa Oromiyaa Keessaa [kutaa 2ffaa]
Niw Ziilaand Dhibeen Koronaa Haaraan Biyya Ishee Keessatti Ka’uu Beeksiste
Arena Tigray Addaan Fottoquu Naannoo Tigraay Hin Simadhu Jedhe